स्कर्पियो दु'र्घटना हुँदा आमा छोराको मृ'त्यु बाबु छोरी घा'इते ! -
स्कर्पियो दु’र्घटना हुँदा आमा छोराको मृ’त्यु बाबु छोरी घा’इते !
हेटौँडा – मकवानपुर जिल्लास्तरीय मानवअधिकार अवस्था अनुगमन समितिका संयोजक तथा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ मकवानपुरका अध्यक्ष डा कृष्ण धितालको परिवार सवार जीप दु’र्घटना हुँदा धितालकी श्रीमती र छोराको मृ’त्यु भएको छ । जीपमा सवार तीन जना घा’इते भएका छन् । सोमबार साँझ मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्डको १७ किलो भन्ने स्थानमा दु’र्घटना भएको थियो । दु’र्घटनामा धितालकी श्रीमती प्रभा गौतम र छोरा अनुजको मृ’त्यु भएको हो ।
स्कर्पियो जीपमा काठमाडौँबाट हेटौँडातर्फ आउने क्रममा भारतीय ग्यास बुलेटसँग ठो’क्किएर दु’र्घटना भएको चितवन प्रहरीले जनाएको छ । धितालकी श्रीमतीको उपचारका लागि अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृ’त्यु भएको चितवन प्रहरीले जनाएको छ । छोरा अनुजको उपचारका क्रममा आज बिहान मृ’त्यु भएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ । दु’र्घटनामा परी चालक राजन घिमिरे ग’म्भीर घा’इते भएका छन् ।
यस्तै कृष्ण धिताल र छोरी वर्षा मध्यम अवस्थामा रहेको चितवन प्रहरीले जनाएको छ । धिताल परिवार सवार बा१३च ५९२९ नंको स्कर्पियो नारायणगढबाट मुग्लिङतर्फ जाँदै गरेको एनएल ०१०५१६० भारतीय नम्बरको ग्यास बुलेटसँग ठोक्किएर दु’र्घटना भएको हो ।